Mizara ny tsy fahombiazako (sy ny fahombiazako?) | Martech Zone
Alahady, Novambra 9, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Satroka tendron'ny McGee's Musings izay nahitako ilay horonan-tsary tsy fahombiazana. Misaotra nanome aingam-panahy an'ity lahatsoratra ity!
Mahalana aho no mihaona amin'ny olona mahomby izay tsy nisy tsy fahombiazana mahatsiravina tao aoriany. Nandritra ny taona maro dia nianatra nandrefy ny fahombiazako tamin'ny fomba hafa aho noho ny ankamaroan'ny. Mahomby aho satria manana zanaka 2 mahafinaritra izay tena reharehako ary efa mampiseho fahaiza-manao tsara mihoatra ny zava-bitako tamin'ny antsasaky ny taonako.
Raha jerena ny fiainako, na izany aza, mino aho fa tonga ny fahombiazako noho ny tsy fahombiazako - na dia teo aza izany. Nahazo tantara miloko tsara tarehy aho ary nandray fanapahan-kevitra ratsy maro, saingy vao 5 taona lasa izay dia nitsahatra tsy nifantoka intsony aho ary nanandrana nanatsara ny toetrako. ratsy at ary nanomboka namantatra hoe iza aho tsara amin'ny. Nanomboka nanodidina ny tenako niaraka tamin'ireo olona nitsara ahy aho ary nanampy ahy handanjalanja ny fahaizako fa tsy hitsikera ny fahalemeko.
Rehefa nifoha aho dia efa nafindra avy amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, nalaina an-keriny tao amin'ny tafika amerikana, nisara-panambadiana, nanangana orinasa roa, very trano ary namindra ny zanako (indroa). Etsy ankilany, nitana mari-pahaizana avo lenta tamin'ny oniversite aho, voaravaka amam-boninahitra amam-boninahitra Gulf War Vet, tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana orinasa maro mahomby, nanana tanana tamin'ny fivarotana orinasa iraisam-pirenena, ary nanana trano azo antoka ho mpitovo ray manan-janaka 2 marina sy miasa mafy.
Sambatra aho izao manampy amin'ny fampandehanana orinasa mitombo izay nanampy tamin'ny fananganana ny drafi-pandraharahana tany am-boalohany. Mbola tsy manankarena aho, ary tsy mivaky loha amin'izany. Ny fianakaviako dia mbola mipetraka ao amin'ny trano iray. Ny vola sisa tavela amin'ny karamako tsirairay dia mandeha amin'ny saram-pianaran'ny zanako lahy na averina ampidirina amin'ny asa vaovao. Raha mbola manana fianakaviana sambatra sy tafo eo an-dohako aho, lehilahy iray sambatra aho!
Raha manontany ahy ny hetsika tokana lehibe indrindra nanova ny fiainako ianao dia manana roa aho:
Ny fisaraham-panambadiana. Raim-pianakaviana be fitiavana aho fa tsy naneho izany mihitsy raha tsy efa sendra ny mety hamoizako ny zanako. Ny fisaraham-panambadiana dia nametraka ny fiainako manontolo ho amin'ny fomba fijery.
Ny fametraham-pialako amin'ny orinasa iray. Taorian'ny nananganana vola miditra amin'ny orinasa iray eo an-toerana izay tsy ao anaty tabilao, dia napetraka teo ambanin'ny fitantanana vaovao aho izay nihevitra fa nandrahona aho ary dia navoakan'ny varavarana. Nody aho, nipetraka teo ambony sezalava ary niantso ny namana Darren Gray sy Pat Coyle.
Nasain'i Pat niasa avy hatrany aho ary tsy niherika intsony. Nanova ny fomba fijeriko momba ny tenako sy ny lanjako ho lasa orinasa ihany koa aho. Tsy an mpiasa indray, ary manohy miasa miaraka amin'ireo orinasa afaka manankarena ny fiainako raha niasa nanankarena ny an'ny zareo aho.
Ny torohevitro ho an'ny tanora dia ny hahitanao ny hery anananao sy ny fomba hisorohana ny toerana na ny fotoana tsy manararaotra azy ireo, raha vao mahita fifaliana ianao. Miaraka amin'ny fahasambarana ny fahombiazana.
Tags: tsy fahombiazanahoronantsary tsy fahombiazanaLahatsary Marketingfahombiazana
9 Nov 2008 tamin'ny 4:32 PM
Hadinonao ny nilaza fa mahay manainga ny hafa ianao. Io, eo imasoko, dia harena mahafinaritra, satria tsy misy olona afaka manaisotra izany aminao amin'ny fandrobana, tsy misy desaster afaka mandrendrika azy na hamoaka azy toy ny bubble…
Lahatsoratra tsara! Misaotra betsaka anao nizara.
9 Nov 2008 tamin'ny 4:36 PM
Misaotra Otir, olona tsara fanahy ianao.
9 Nov 2008 tamin'ny 5:12 PM
Tadidiko mazava tsara tamin'izaho mbola tanora nilaza tamiko fa afaka manao na inona na inona amin'ny fiainana izay apetrako ao an-tsaiko. Ary raha ny olona manodidina ahy dia tsara sy nampahery; tsy nisy olona afaka nanampy tamin'ny fitarihana ahy sy nanome torolàlana momba ny fomba hanovana ny heriko ho fahaizana amidy ary ny fomba hialana amin'ny toerana malemy.
Amin'ny maha-tanora anao; Mpiditra an-tsokosoko aho ary mandraka androany dia hitako fa fanamby ny fifandraisana sy ny fanaovana fifandraisana stratejika ho an'ny asako.
Raha mijery ny fiainako aho; Tsy mino aho fa nanana tsy fahombiazana be dia be satria tsy mbola nanararaotra zavatra lehibe mety hiteraka fahombiazana lehibe.
Doug, misaotra anao nanome be ahy hieritreritra.
10 Nov 2008 tamin'ny 8:44 PM
Scott, tongasoa be ianao! Olona manana talenta mahavariana ianao - aza avela hisy hanakana anao.
10 Nov 2008 tamin'ny 8:09 PM
Hatramin'ny nahitako anao voalohany, ianao dia nahatonga ahy ho aingam-panahy ho ahy mandrakariva ary ho ME unapologetically. Azoko antoka fa betsaka ireo manohana ahy amin'izany.
Ary, rahampitso maraina, misaotra anao tamin'ny asa fanompoana nataonao ho an'ny firenentsika!
10 Nov 2008 tamin'ny 8:45 PM
Misaotra betsaka Julie! Ny serivisiko dia sombi-mofomamy raha ampitahaina amin'ny Vets anay ankehitriny.
11 Nov 2008 tamin'ny 8:54 PM
Mahaliana fa hitanao tamin'ny alàlan'ny “fizahan-toetra tamin'ny afo” fa ny fampiasana ny herin'ny tena dia iray amin'ireo lakilen'ny fahasambarana.
Tonga tamin'ny fanatsoahan-kevitra toy izany koa ny mpahay siansa. Afaka mahita andiana horonan-tsary sy lahatsoratra manadihady momba io fiheverana ny hoe “fahasambarana” io ianao Eto.